တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ၊ ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး Colonel General Alexander V. Fomin အား လက်ခံတွေ့ဆုံ » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
မတ် ၃၀၊ ၂၀၁၉
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း နိုင်ငံ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး Colonel General Alexander V. Fomin အား ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံ တွေ့ဆုံသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ညိုစော၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးထွဋ်နှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများတက်ရောက်ကြပြီး ရုရှား ဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီးနှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ရုရှားဖက်ဒရေး ရှင်းနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Dr. Nikolay A. LISTOPADOV၊ စစ်သံမှူးနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက် ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် မြန်မာ-ရုရှားနှစ်နိုင်ငံ စစ်ဘက်နည်းပညာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး၊ ဆေးဘက်နည်း ပညာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနှင့် အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စရပ်များ၊ တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ ရုရှားနိုင်ငံတွင် International Army Games -2019 ကျင်းပပြုလုပ်မည့်အခြေအနေများအား ရင်းနှီးပွင့်လင်း စွာအမြင်ချင်း ဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
နပွေညျတျော၊ မတျ ၃၀
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ ရုရှားဖကျဒရေးရှငျး နိုငျငံ၊ ကာကှယျရေးဝနျကွီးဌာန ဒုတိယဝနျကွီး Colonel General Alexander V. Fomin အား ယနနေံ့နကျပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဘုရငျ့နောငျရိပျသာဧညျ့ခနျးမဆောငျ၌ လကျခံ တှဆေုံ့သညျ။
အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ ဒုတိယ ဗိုလျခြုပျကွီး ညိုစော၊ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး စိုးထှဋျနှငျ့ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြားတကျရောကျကွပွီး ရုရှား ဖကျဒရေးရှငျးနိုငျငံ၊ ကာကှယျရေးဝနျကွီးဌာန ဒုတိယဝနျကွီးနှငျ့အတူ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ရုရှားဖကျဒရေး ရှငျးနိုငျငံ သံအမတျကွီး H.E. Dr. Nikolay A. LISTOPADOV၊ စဈသံမှူးနှငျ့ တာဝနျရှိသူမြား တကျရောကျ ကွသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျ မွနျမာ-ရုရှားနှဈနိုငျငံ စဈဘကျနညျးပညာပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေး၊ ဆေးဘကျနညျး ပညာပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေးနှငျ့ အကွမျးဖကျမှုတိုကျဖကျြရေးတှငျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေးကိစ်စရပျမြား၊ တပျမတျောနှဈရပျအကွား ခဈြကွညျရငျးနှီးမှုနှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုတိုးမွှငျ့ရေးဆိုငျရာကိစ်စရပျမြား၊ ရုရှားနိုငျငံတှငျ International Army Games -2019 ကငျြးပပွုလုပျမညျ့အခွအေနမြေားအား ရငျးနှီးပှငျ့လငျး စှာအမွငျခငျြး ဖလှယျဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
ဇန်နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၈ Admin 0
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ထိုင်းဘုရင့်လေတပ်ဦးစီးချုပ်အား လက်ခံ တွေ့ဆုံ
ဇန်နဝါရီ ၂၉၊ ၂၀၂၀ Admin 0